Mika 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Zvakaipa zvevaIsraeri (1-6)
“Vavengi vemunhu vanhu vemumba make” (6)
Vanhu vaMwari vanorwirwa (8-13)
Mika anonyengetera uye anorumbidza Mwari (14-20)
Mhinduro yaJehovha (15-17)
‘Ndoupi Mwari akaita saJehovha?’ (18)
7 Maiwee kani! Ndakaita semunhu uya anotiKana michero yemuzhizha yaunganidzwa,Uye vanonhonga mazambiringa anenge asara pakukohwa vapedza,Anosvika oshaya sumbu remazambiringa rekudya,Kana onde rekutanga raanoda chaizvo. 2 Panyika hapasisina munhu akavimbika;Pavanhu hapana munhu akarurama.+ Vese zvavo vanohwandira vanhu kuti vadeure ropa.+ Munhu wese anovhima hama yake nemambure. 3 Vava shasha dzekuita zvakaipa nemaoko avo;+Muchinda ari kumanikidza vanhu kuti vamupe zvinhu,Mutongi anokumbira kubhadharwa,+Munhu wepamusorosoro anoita kuti vanhu vazive zvaanoda,+Uye vanozvironga* pamwe chete. 4 Munhu anoita zvakanaka kupfuura vese pakati pavo akaita seminzwa,Munhu akarurama kupfuura vese pakati pavo akaipa kupfuura ruzhowa rweminzwa.* Zuva remurindi wako nerekutongwa kwako richasvika.+ Uye vachavhunduka.+ 5 Musavimba neshamwari dzenyuKana kuvimba neshamwari yepedyo.+ Ngwarira zvaunotaura kune uya anorara pachipfuva chako. 6 Nekuti mwanakomana ari kuzvidza baba vake,Mwanasikana ari kupandukira amai vake,+Uye muroora haasi kuwirirana navamwene vake;+Vavengi vemunhu vanhu vemumba make.+ 7 Asi ini ndicharamba ndichitarisira kuna Jehovha.+ Ndichamirira Mwari weruponeso rwangu.*+ Mwari wangu achandinzwa.+ 8 Rega kufarira dambudziko rangu iwe muvengi* wangu. Ndakawira pasi asi ndichasimuka;Ndiri kugara murima, asi Jehovha achava chiedza changu. 9 Ndichatambura nehasha dzaJehovhaNekuti ndakamutadzira,+Ndichatambura nadzo kusvikira andirwira panyaya yangu oita kuti itongwe zvakanaka. Achandiunza kuchiedza;Ndichaona kururama kwake. 10 Muvengi wangu achaonawo uye achanyara,Iye mukadzi uya wekuti kwandiri: “Jehovha Mwari wako ari kupi?”+ Maziso angu achamutarisa. Iye zvino achatsikwa-tsikwa semadhaka emumigwagwa. 11 Richava zuva rekuvaka masvingo ako ematombo;Zuva iroro nyika ichawedzerwa kukura kwayo.* 12 Zuva iroro vachauya kwauriVachibva kuAsiriya nekumaguta eIjipiti,Kubvira kuIjipiti kusvika kuRwizi;*Kubva kugungwa kusvika kugungwa, uye kubva kugomo kusvika kugomo.+ 13 Nyika ichava dongo nemhaka yevagari vayo,Pamusana pezvavakaita. 14 Fudzai vanhu venyu nemudonzvo wenyu, iwo makwai enhaka yenyu,+Aya aigara ega musango, pakati pemunda wemichero. Ngaafure muBhashani neGiriyedhi+ sezvaaimboita kare. 15 “Ndichavaratidza zvinhu zvinoshamisa,Sepamazuva avakabuda munyika yeIjipiti.+ 16 Marudzi achazviona onyara pasinei nesimba rese raainaro.+ Vachabata miromo yavo;Nzeve dzavo dzichavhara. 17 Vachananzva guruva senyoka;+Vachabuda vachidedera munhare* dzavo sezvinokambaira panyika. Vachauya kuna Jehovha Mwari wedu vachidedera,Uye vachakutyai.”+ 18 Ndoupi Mwari akaita semi,Anoregerera kukanganisa uye anoregerera kudarika+ kwevakasara pavanhu vake?*+ Haazorambi akatsamwa nekusingaperi,Nekuti anofarira rudo rusingachinji.+ 19 Achatinzwira tsitsi zvakare;+ achatsikirira kukanganisa kwedu. Muchakanda zvivi zvavo zvese pasi pegungwa.+ 20 Muchava akatendeka kuna Jakobho,Mucharatidza rudo rusingachinji kuna Abrahamu,Sekupika kwamakaita kumadzitateguru edu kubvira kare.+
^ ChiHeb., “vanozviruka.”
^ Kana kuti “heji yeminzwa.”
^ Kana kuti “Ndichamirira Mwari weruponeso rwangu nemwoyo murefu.”
^ MuchiHebheru, shoko rakashandurwa kuti “muvengi” rinoratidza kuti muvengi wacho munhukadzi.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “murau uchava kure.”
^ ChiHeb., “panhaka yake?”